Indlu yeeNdwendwe eConnolly, Joondalup
Indlu yeeNdwendwe iConnolly ifanelekile kuye nabani na ozimase itheko kwindawo eyaziwa ngamazwe ngamazwe iJoondalup Golf Resort, otyelela iYunivesithi yase-Edith Cowan (uninzi lweendwendwe zethu ziyafunda, ziyafundisa okanye zisenza uphando apho), iJoondalup Health Campus, okanye abantu abandwendwela izalamane amahlomela edolophu asemantla. Kuya kuba kuhle ukuba ufudukela kwindawo kwaye ufuna indawo yokuhlala okwethutyana, okanye ukuba useholideyini kwaye ufuna ukonwabela iilwandle zethu ezikufutshane kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane.
Indlu yeeNdwendwe, eyahluke ngokupheleleyo kwikhaya lethu, inegumbi elinye lokulala kunye nebhedi yesofa etofotofo kwigumbi lokuhlala. Ihlala ngokulula izibini ezibini, kwaye ingafanelana nabahambi beshishini kunye nabahambi bodwa! Igqitywe ngoJuni ka-2018, igqityezelwe kumgangatho ophezulu, kwaye sifuna ukukunika zonke izinto esizixabisayo xa sihambahamba – iqonga leengxoxo elithandekayo apho ungancokola khona malunga neengozi zosuku, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle. , iitawuli ezimfumamfuma kunye nekhrisimesi, amashiti efibre yendalo anemiqamelo emininzi.
Inefestile enkulu ukusuka emgangathweni ukuya eluphahleni ejonge egadini, iNdlu yeeNdwendwe inepatio yayo enendawo yokutyela yangaphandle kwigadi ekwabelwana ngayo apho unokutya khona izidlo zakho okanye ukonwabele iglasi yewayini ngelixa usonwabele ukuba kunye neentaka ezininzi nazo. ndwendwela. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-54-intshi ye-TV ene-Chromecast Ultra, i-Blueray player, i-high-speed-speed-broadband (NBN) uxhumano, iindawo zokutshaja iifowuni, i-air conditioning kunye nokufudumala kuyo yonke indawo, i-fan yesilingi kwigumbi lokulala, umatshini wokuhlamba, intsimbi / ironing board, hairdryer, nelinen ekumgangatho ophezulu kunye neetawuli.
Igumbi lokulala linebhedi elingana nokumkanikazi, kwaye kukho ibhedi ekhululekileyo yesofa kwigumbi lokuhlala. Ithala leencwadi elikhulu lokuthatha-okanye-lishiye, ukhetho lweDVD kunye nemidlalo ibonelelwe ukuba uyonwabele. Uya kuba nesango lakho lokungena labucala, kwaye uya kunikwa ikhowudi yepini ozikhethele yona yesitshixo socango lwe-elektroniki, okuthetha ukuba ungafika kwaye uhambe ngokukhululekileyo. Uya kuba nendawo yakho yokupaka enendawo yeemoto ezimbini ezinkulu. Ipropathi iyilelwe ukuba ifikeleleke kubantu abakhubazekileyo-nceda uqhagamshelane nababuki zindwendwe ukuze uxoxe ngeemfuno zakho.
IConnolly yindawo ezolileyo, enamagqabi eyakhiwe kufutshane neJoondalup Golf Resort eyaziwayo kumazwe ngamazwe. Ikufuphi neevenkile ezinkulu ezininzi, kwaye imalunga nemizuzu engama-30 yokuqhuba ukusuka kwi-Perth CBD (kuxhomekeke kwiimeko zendlela) kunye nemizuzu engama-20 ngololiwe. Ikufuphi kakhulu nolwandle oluhle lwesanti emhlophe kunye neendawo ezininzi zokutyela ezilungileyo, kwaye ihamba umgama oya kwisikhululo sikaloliwe, indawo enkulu yeebhasi kunye neZiko lokuThenga laseLakeside elibamba intaphane yefashoni, indawo yokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu xa uhamba, iZiko lezoLonwabo iArena liqhayisa ngedama lokuqubha elilingana ne-Olimpiki kunye nebala lokudlala lamanzi kunye nejimu enkulu kunye nezixhobo zemidlalo. Ukuba ufuna ukufunda ukusefa, iJoondalup inechibi langaphakathi lokusefa, iAloha, imizuzu emihlanu xa uqhuba, kwaye kukwakho neClip kunye neClimb kunye namaziko etrampoline akufutshane. Jonga iphepha lethu likaFacebook (Indlu yeeNdwendwe zaseConnolly) ngolwazi olungakumbi kunye neefoto zendawo!
Siyakuthanda ukudibana nabantu abavela kwihlabathi liphela, kwaye sijonge phambili kakhulu ekwamkeleni kwakho kwiNdlu yeeNdwendwe. Siya kuvuya ngakumbi ukuphendula nayiphi na imibuzo onayo okanye ukukunceda ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza ngayo. Sikwaqaphela ukuba ezinye iindwendwe zinokufuna ukuzimela ngokupheleleyo kwaye zabucala.
Siyakuthanda ukudibana nabantu abavela kwihlabathi liphela, kwaye sijonge phambili kakhulu ekwamkeleni kwakho kwiNdlu yeeNdwendwe. Siya kuvuya ngakumbi ukuphendula nayiphi na imibu…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$142
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Connolly